Gịnị Ka Baịbụl Kwuru Gbasara Iwe?
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Argentinean Sign Language Armenian Azerbaijani Bashkir Bislama Brazilian Sign Language Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Kannada Kikaonde Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwanyama Kyangonde Lingala Lithuanian Luganda Luo Malagasy Malay Malayalam Maltese Mambwe-Lungu Moore Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Norwegian Nzema Ossetian Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Portuguese Portuguese (European) Punjabi Punjabi (Shahmukhi) Quichua (Chimborazo) Romanian Russian Sango Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Spanish Spanish Sign Language Sunda Swahili Swati Swedish Tagalog Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urdu Urhobo Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Vietnamese Welsh Wichi Yoruba Zapotec (Quiatoni) Zulu
Baịbụl na-akụzi na iwe ọkụ na-emebi ihe. Ọ na-akpa ma onye na-ewe iwe ọkụ ma ndị nọ ya nso aka ọjọọ. (Ilu 29:22) Ọ bụ eziokwu na e nwere ihe nwere ike ime ka mmadụ wee iwe mgbe ụfọdụ, Baịbụl kwuru na ndị na-ewe “iwe ọkụ” agaghị eketa Alaeze Chineke. (Ndị Galeshia 5:​19-21) E nwere ihe ndị e kwuru na Baịbụl nwere ike inyere mmadụ aka ịkwụsị ịna-ewe iwe ọkụ.
Ọ̀ọ mgbe niile ka iwe iwe dị njọ?
Olee mgbe iwe iwe dị njọ?
Olee ihe i nwere ike ime ka ị ghara ịna-ewekarị iwe?
Amaokwu Baịbụl ndị kwuru gbasara iwe
Mba. E nwere ihe ndị nwere ike ime ka mmadụ wee iwe. Dị ka ihe atụ, ezigbo “iwe were” ohu Chineke bụ́ Nehemaya mgbe ọ nụrụ na a na-echi ụfọdụ ndị ya na ha so na-efe Jehova ọnụ n’ala.​—Nehemaya 5:6.
Mgbe ụfọdụ, Chineke na-ewe iwe. Dị ka ihe atụ, mgbe ndị ohu Chineke n’oge ochie kwụsịrị ife ya ma malite ife chi ụgha, ‘Jehova wesoro ha iwe dị ọkụ.’ (Ndị Ikpe 2:​13, 14) N’agbanyeghị na e nwere mgbe Jehova were iwe, e jighị iwe mara ya. Ọ na-ewe iwe naanị mgbe e nwere ezigbo ihe kpatara ya, ọ naghịkwa ewefe ya ókè.​—Ọpụpụ 34:6; Aịzaya 48:9.
Iwe dị njọ ma ọ bụrụ iwe ọkụ, ma ọ bụkwanụ nke na-enweghị isi. Ọ bụ ụdị iwe a ka ụmụ mmadụ na-ezughị okè na-ewekarị. Dị ka ihe atụ:
Ken ‘were iwe dị ọkụ’ mgbe Chineke na-anabataghị àjà ọ chụrụ. Ken wegidere iwe ruo na nke igbu nwanne ya.​—Jenesis 4:​3-8.
Jona onye amụma ‘were iwe dị ọkụ’ mgbe Chineke meere ndị Ninive ebere. Chineke gbaziri Jona, gwa ya na ‘iwe ọkụ ọ na-ewe ezighị ezi,’ na o kwesịrị imere ndị mmehie ahụ chegharịrị echegharị ebere.​—Jona 3:10–4:​1, 4, 11. *
Ihe atụ ndị a gosiri na ‘iwe mmadụ na-ezughị okè na-ewe anaghị arụpụta ezi omume Chineke.’​—Jems 1:20.
Ghọta nsogbu iwe ọkụ nwere ike ịkpata. Ụfọdụ ndị chere na ọ bụrụ na ha ewee iwe ọkụ, na ọ na-egosi na ha dị ike. Ma, nke bụ́ eziokwu bụ na onye na-ewekarị iwe ọkụ nwere ezigbo nsogbu. “Dị ka obodo e tidara etida nke na-enweghị mgbidi, otú ahụ ka onye na-adịghị ejide mmụọ ya dị.” (Ilu 25:28) Ma, ọ bụrụ na anyị na-ejideli onwe anyị ma a kpasuo anyị iwe, o gosịrị na anyị bụ dimkpa, marakwa ihe. Baịbụl kwuru, sị: “Onye na-adịghị ewe iwe ọsọ ọsọ dị mma karịa dike.”​—Ilu 16:32.
Chịkwaa iwe gị tupu ya emee ka i mee ihe ị ga-akwara mmakwaara. Abụ Ọma 37:8 kwuru sị: “Hapụ iwe, hapụkwa ọnụma; ewela iwe naanị iji mee ihe ọjọọ.” Ị chọpụtara na e nwere ihe anyị nwere ike ime ma a kpasuo anyị iwe? Ndị Efesọs kwuru, sị: “Weenụ iwe, ma unu emehiela.”
A kpasuo gị iwe, o kwe omume, si ebe ahụ pụọ tupu iwe gị aka njọ. Baịbụl kwuru, sị: “Mmalite esemokwu dị ka mmadụ imeghere mmiri ụzọ; ya mere, tupu esemokwu amalite, si n’ebe ahụ pụọ.” (Ilu 17:14) Ọ bụ eziokwu na ọ dị mma idozi esemeokwu ngwa ngwa, gị na onye gị na ya na-ese okwu kwesịrị ibugodị ụzọ kwọsa obi unu mmiri tupu unu enwee ike imeda obi kwurịta nsogbu ahụ.
Mata otú ihe si mee. Ilu 19:11 kwuru, sị: “Nghọta mmadụ nwere na-eme ka ọ ghara iwe iwe ọsọ ọsọ.” Ọ ga-akacha mma ịma kpọmkwem otú ihe si mee tupu anyị ewewe iwe. Ọ bụrụ na anyị egee ntị nke ọma mata otú niile ihe si mee, o nwere ike ime ka anyị ghara iwewe iwe na-enweghị isi​—Jems 1:​19.
Kpee ekpere maka udo nke obi. Ekpere nwere ike inyere gị aka inweta “udo nke Chineke nke karịrị echiche niile.” (Ndị Filipaị 4:7) Ekpere bụ otu n’ime ụzọ a kacha esi enweta mmụọ nsọ, bụ́kwanụ ihe nwere ike ime ka anyị nwee àgwà ndị dị ka udo, ndidi, na njide onwe onye.​—Luk 11:13; Ndị Galeshia 5:​22, 23.
Saa anya na mmiri họrọ ndị gị na ha ga na-akpa. Anyị na-akpakarị àgwà otú ndị enyi anyị si akpa. Ọ bụ ya mere Baịbụl ji dọọ anyị aka na ntị. Ọ sịrị: “Abụla enyi onye ọ bụla nke na-ewekarị iwe; gị na onye na-ewe iwe ọkụ akpakọrịtala.” Maka gịnị? “Ka ị ghara ịmụta ụzọ ya wee wetara mkpụrụ obi gị ọnyà.”​—Ilu 22:​24, 25.
Ilu 16:32: “Onye na-adịghị ewe iwe ọsọ ọsọ dị mma karịa dike.”
Ihe ọ pụtara: Ọ bụrụ na ị na-ejideli onwe gị ma a kpasuo gị iwe, ọ na-egosi na ị bụ dimkpa.
Ilu 17:14: “Mmalite esemokwu dị ka mmadụ imeghere mmiri ụzọ; ya mere, tupu esemokwu amalite, si n’ebe ahụ pụọ.”
Ihe ọ pụtara: Iwe bịawa gị, si ebe ahụ pụo
Ilu 19:11: “Nghọta mmadụ nwere na-eme ka ọ ghara iwe iwe ọsọ ọsọ.”
Ihe ọ pụtara: Anyị agaghị na-ewe iwe na-enweghị isi ma ọ bụrụ na anyị eburu ụzọ chọpụta otú ihe si mee kama ibu ụzọ jiri iwe mee ihe tupu anyị amara kpọmkwem otú ihe si mee.
Ilu 22:​24, 25: “Abụla enyi onye ọ bụla nke na-ewekarị iwe; gị na onye na-ewe iwe ọkụ akpakọrịtala, ka ị ghara ịmụta ụzọ ya.”
Ihe ọ pụtara: Ọ bụrụ na anyị na ndị na-ewekarị iwe ana-akpa, anyị nwere ike ịna-eme ka ha.
Ilu 29:11: “Onye nzuzu adịghị ejide mmụọ ya ma ọlị.”
Ihe ọ pụtara: Anyị kwesịrị ịna-ejide onwe anyị ma a kpasuo anyị iwe kama ịna-ewekari iwe.
Ndị Galeshia 5:​22, 23: “Mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ ịhụnanya, ọṅụ, udo, ogologo ntachi obi, obiọma, ịdị mma, okwukwe, ịdị nwayọọ, njide onwe onye.”
Ihe ọ pụtara: Mmụọ nsọ nwere ike inyere anyị aka inwe àgwà ndị ga-eme ka anyị ghara ịna-ewekarị iwe.
Ndị Efesọs 4:26: “Weenụ iwe, ma unu emehiela.”
Ihe ọ pụtara: O nweghị otú anyị ga-esi kwụsịchaa ịna-ewe iwe, mana, anyị nwere ike ịna-ejide onwe anyị ma a kpasuo anyị iwe ma ọ bụkwanụ ghara ịna-ewekarị iwe.
Jems 1:19: “Onye ọ bụla aghaghị ịbụ onye na-anụ ihe ngwa ngwa, onye na-adịghị ekwu okwu ngwa ngwa, onye na-adịghị ewe iwe ngwa ngwa.”
Ihe ọ pụtara: Ọ bụrụ na anyị ana-ege ntị nke ọma, o nwere ike inyere anyị aka ịghara ịna-ewe iwe ngwa ngwa.
^ par. 6 O doro anya na Jona nabatara mgbazi ahụ ma kwụsị iwe iwe. Ihe gosiri na nke a bụ eziokwu bụ na Chineke ji ya dee akwụkwọ Baịbụl ahụ a kpọrọ aha ya.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Gịnị Ka Baịbụl Kwuru Gbasara Iwe?
ijwbq isiokwu 152